Axmed Fiqi oo soo bandhigay 9 Qodob oo caddeyn u ah in Ikraan Tahlil ku maqan tahay Madaxda NISA - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Wasiirka Amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa soo bandhigay 9 qodob oo uu sheegay inay caddeyn u tahay in Ikraan Tahliil Faarax oo ka tirsaneyd Hay’adda Nabadsugidda iyo Sirdoonka Soomaaliya ay ku maqan tahay isla Hay’addaasi.
Fiqi oo hore u soo noqday agaasimaha Hay’adda NISA ayaa sheegay in Cadaymahan ay marag-ma-doonto yihiin in Ikraan ku maqan tahay Hogaanka NISA, isla amrkaana Villa Somalia ay u soo tafa-xaydatay sida uu yiri ka xaglinta cadaaladda iyo duugista Kiiska Ikraam.
Qodobada uu soo bandhigay waxay kala yihiin:
9. Farmaajo oo ku gorgortamaya in kiiska guddi loo saaro, lagana daayo maxkamadda.
Ma dhumayo xaq qofkii lahaa daba-joogo.. kiiska Ikraam wuxuu imtixaanayaa maxkamadda gacanta ku haysa in sharcigu uu sarreeyo ama in qofku sarreeyo.
Next articleLix Musharax oo ka haray Doorashada Aqalka Sare ee Hirshabeele (Akhriso Magacyada)